अमेरिकामा एकैदिन १,२५५ को मृ`त्यु, संक्रमितको संख्या साढे ३ लाख पार ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/अमेरिकामा एकैदिन १,२५५ को मृ`त्यु, संक्रमितको संख्या साढे ३ लाख पार !
अमेरिकामा एकैदिन १,२५५ को मृ`त्यु, संक्रमितको संख्या साढे ३ लाख पार !
अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्र`मणका कारण १२ सय ५५ ले ज्या`न गुमाएका छन् । यससँगै यहाँ हालसम्म १० हजार ८ सय ७१ जनाको मृ`त्यु भएको छ । Worldometer को पछिल्लो आँकडा अनुसार एकैदिन ३० हजार ३ सय ३१ जना नयाँ संक्रमित थपिँदा संक्र`मितको संख्या ३ लाख ६७ हजार ४ पुगेको छ । संक्र`मितमध्ये ८ हजार ८ सय ७९ को स्थिती गम्भीर बताइएको छ ।
यद्यपि, यहाँ १९ हजार ६ सय ७१ संक्र`मित निको भएर घर फर्किसकेका छन् । पछिल्लो केही समयदेखि अमेरिकामा मृतक र संक्रमितको संख्यामा ह्वा`त्तै वृद्धि भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलगायतक विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञले अबको दुई हप्ता अमेरिकीहरुका लागि सबैभन्दा पीडादायी समय हुने चेतावनी पनि दिँदै आएका छन् ।
आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले कोरोना`भाइरसको महा`मारीका बीच हप्ताको एकदिन डाक्टरको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने योजना बनाएका छन् । यो भा`राद्का`रले किङ्ग्स कलेजबाट औषधी विज्ञान अध्ययन गरेका हुन् भने डब्लिनको ट्रिनिटी कलेजबाट डाक्टरको तालिम पनि लिएका छन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनले सात वर्ष डाक्टरी पेशासमेत गरेको रोयटर्सले जानकारी दिएको छ ।
पूर्व चि`कित्सक भाराद्कार आयर`ल्याण्डको मेडिकल रजिस्ट्रीमा पुनः समावेश हुँदै उनले आयरल्याण्डको स्वास्थ्य सेवा कार्यकारीलाई आफ्नो डाक्टरी सेवाको प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले एबीसी न्यूजलाई सोमबार जानकारी दिए ।‘उनका परिवारका थुप्रै सदस्य र साथीहरु स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत छन् । उनले सानै प्रयास मार्फत् भएपनि सहयोग गर्न चाहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।